नेपालमा पनि श’व गृहमा श’वको लाइन, गेट बाहिरै बज्यो एकोहोरो श’ङ्ख ! – Online Khabar 24
नेपालमा पनि श’व गृहमा श’वको लाइन, गेट बाहिरै बज्यो एकोहोरो श’ङ्ख !
टी’ठलाग्दो अनुहार बनाएका ती युवाले ख’ल्तीबाट मोबाइल झि’केर बा’को अ’न्तिम तस्वीर लिए । उनले फाेटाे खि’चेलगत्तै सेनाको टोलीले श’व उ’ठाइहाल्याे ।बा’लाई अ’न्तिम बि’दाइ गर्न उनी एक्लै उपस्थित थिए ।
धू’प स’ल्काउन पनि उनलाई अर्कैले साथ दिनु पर्‍यो । दुई वटै श’वको श्र’द्धाञ्जली सकिएपछि सेनाको टोली’ले अलि पर लगेर दु’वो चढाएर स’लामी दियाे । र, अ’न्तिम सं’स्कारका लागि श’वलाई विद्युतीय श’व दा’हगृह भित्र लगियाे ।
सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने, ‘पोजिटिभ स’र्टिफिकेट, अस्पतालले दिएको मृ’त्युको स’र्टिफिकेट पाएपछि परिवारको समहमतितमा व्यवस्थापन गर्छाैं ।’उपत्यकामा वि’द्युतीय श’व दा’हगृह एउटा मात्र भएकाले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘राति पनि श’व व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘वि’द्युतीय श’व दा’हगृह एउटा मात्र भएकाले ला’इन बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’
खबर शिलापत्रबाट साभार गरियको हो ।
Prevआइतवार बढयो सुनको मुल्य, कति पुग्यो त जान्नुस
next‘ म बाँच्नु जति बाँचिसकेँ’ भन्दै एक युबकको लागि अस्पतालको बेड खाली गरिदिए यी वृद्धले